Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy S kwi-Android 2.3.6 JVU | I-Androidsis
UFrancisco Ruiz | | Ingcambu Android, i-ROM, Samsung
Isifundo esisibonisa apha ngezantsi, njenge hlaziya i-Samsung Galaxy S mediante odin kwi firmware 2.3.6 kunye nokuhambelana kwayo Umsuka, iya kusebenza, phakathi kwezinye izinto, ukufaka ifayile ye- Ukubuyiselwa kweClockWorkmod kweyethu GT-I9000, ukuze kamva ube nakho ukufaka nayiphi na Ulungiso lomtshato kwaye ilungiselelwe isiphelo sethu.
Into yokuqala ekufuneka sijongile kukuba i Samsung Galaxy S unokufikelela kwimowudi umxokozeloUkwenza oku kunye nesiphelo sendlela esipheleleyo siya kuyiguqula ngokudibanisa amaqhosha alandelayo, Vol minus + iqhosha lasekhaya + Amandla iqhosha, Siza kubacinezela ngaxeshanye kwaye ngaphandle kokubakhulula de kube ngathi kuvela isikrini:
Ukuba kunjalo, siya kuba sikulungele ukufaka i-firmware JVU nge Android 2.3.6 usebenzisa isixhobo esiya kuba sisisiseko kwaye sibalulekile kuthi Android, esi sixhobo asikho enye ngaphandle Odin for Windows.
ukuba Phuma kwimowudi yokukhuphela Into ekufuneka uyenzile kukubamba iqhosha lamandla malunga nemizuzwana elishumis, okanye ukusilela oko, susa ibhetri kangangemizuzwana emihlanu kwaye uyibuyisele ngaphakathi.
1 Ilungiselela ukufakwa
2 Indlela yokufaka iFirmware
3 Indlela yokufaka i-CF Root
Gcina ukhumbula ukuba ngokulandela amanyathelo kwesi sifundo Kuya kufuneka uthathe uxanduva olupheleleyo lwento enokwenzeka kwisixhobo sakho, Ukuba unamathela kwimiyalelo echazwe apha, akukho nto imbi kufuneka yenzeke, kodwa ukucinga ukuba ngalo lonke ixesha singena kwinkqubo yangaphakathi yeGalaxy yethu kukho umngcipheko ukuba asenzi izinto njengoko kubonisiwe.
Kwakhona ngaphambi kokuqala esi sifundo Kuya kufuneka ibhetri ihlawuliswe ukusuka kwisiphelo sakho ukuya 100 amaxesha 100.
Kufuneka sibe nayo yonke into abaqhubi ifakwe ngokufanelekileyo kwifayile yethu ye- PC, ukuba ufake iiKies kwaye ulungelelanise ngempumelelo i-terminal yakho ngamanye amaxesha, uya kuba sele uneemoto eziyimfuneko ezifakiweyo, ukuba akunjalo, yiya kwiwebhusayithi esemthethweni ye Samsung kwaye ukhuphele uguqulelo lwakutshanje lwaseburhulumenteni lwale nkqubo kwaye uyifake kwaye ungqamanise isixhobo sakho.
Into yokuqala esiza kuyenza sakube siqinisekisile ukuba sinokufikelela kwimowudi umxokozelo, siya kukhuphela zonke iifayile eziyimfuneko ukuze siphumelele esi sifundo, kuba oku kuncamathisela amakhonkco kuzo zombini inkqubo Odin yeWindows yena ke IFirmware esemthethweni yeJVU kunye nokuhambelana kwayo CF Ingcambu.
Emva koko ndikushiyela ikhonkco le- kufuneka ube nefayile ebizwa ngokuba yiPit 512, nto leyo eyimfuneko Flash usebenzisa iOdin zethu Galaxy, ihlala iza ngaphakathi kwithebhulethi ye firmware okanye del CF Ingcambu, kodwa njengoko ngamanye amaxesha ndikhe ndifumana ukumangaliswa okungathandekiyo kukuba le fayile ibalulekileyo ibilahlekile, ndiyincamathisela nganye ukuze uyigcine ikhuselekile.
Nje ukuba zonke iifayile zikhutshelwe, siza kukhupha iziphu konke endaweni yethu Pc esithanda kakhulu, ndikucebisa ukuba wenze enye ifolda entsha kwidesktop kwaye uziphu zonke ngaphakathi, zonke ngaphandle kwefayile yokugqibela, kuba ayicinezelwanga.
Ngoku kweli nyathelo siza kuya kwimenyu yeGalaxy S yethu kwaye sisebenzise ifayile ye ukususa iibhagi kwi-USB, ekule ndlela ilandelayo: Imenyu / Useto / Izicelo / uPhuhliso.
Nje ukuba yonke le nto yenziwe, siya kuba nakho ukuyivuselela odin zethu Galaxy S ukuguqulela 2.3.6 kwaye ufake ehambelana nayo CF Ingcambu.
Okokuqala siza kujonga loo nto Kies ivaliwe ngokupheleleyo, kuba oku siza kuvula ifayile ye- Umphathi womsebenzi weWindows kwaye siya kuyigqiba nayiphi na inkqubo enento yokwenza Kies, ngokujonga nje amagama azo zonke iinkqubo ezivuliweyo, ukuba kukho nelinye elibandakanyiweyo igama Kies kwenye indawo besizakuyivala nathi.
Ngoku siza kuqhuba inkqubo odin kwaye iyakusibonisa ifestile enje:
Siza kubeka ifayile yePit esiyikhuphele okokugqibela kwiqhosha legama elifanayo, kuba oku siza kucofa kwi-PIT kwaye sizulazule kwindlela esasikade siyigcina kuyo ngaphambili.
Siza kujonga ukuba iibhokisi zohlobo Jonga uluhlu iinketho ziphawulwe ngasekhohlo Ukuhlulwa kwakhona, Ukuqalisa kwakhona ngokuzenzekelayo y F. Cwangcisa kwakhona ixesha.
Nje ukuba yonke into ihlolwe, siza kuyicima ngokupheleleyo i-Galaxy, Kwaye siyakuyivula ngokudibanisa amaqhosha akhankanywe apha ngasentla kwi Imowudi yokukhuphelaSiza kuyidibanisa nePC kwaye sijonge kwiscreen seOdin ukuba siyamkele ngokuchanekileyo, kuba oku kuya kusibonisa igama COM ilandelwa linani kanye ngasentla ngasekhohlo.
Ngoku kufuneka sicinezele iqhosha Qala kwaye ungachukumisi nantoni na ide iphele le nkqubo kwaye kwinxalenye ephezulu yasekhohlo inika ingxelo ngegama KudlulaAyicacanga into yokuba asifanele, ngexesha lale nkqubo cima ifowuni phantsi kwazo naziphi na iimeko, kunye nokukhusela ikhompyuter yethu ekungeneni okanye ukumiswaokanye hibernación Akukho nto injalo.
Inkqubo inokuthatha ezimbalwa malunga nemizuzu emihlanu. De silibone igama PASS Ungachukumisi nantoni na, nje ukuba asinike Kudlula ngoku singanqamula ifowuni kwikhompyuter kwaye siyilinde ukuba iqale kwakhona.
Ngenyathelo elidlulileyo uya kuba nayo i-Galaxy ehlaziyiweyo ngokuchanekileyo kwaye isebenze ngokupheleleyo kuhlobo Inkqubo ye-Android 2.3.6, Kweli nyathelo lilandelayo, siya kulinikela kwinto enye ukufaka isixhobo se- I-kernel yesiqhelo kunye Umsuka kunye Ukubuyiselwa kweClockWorkmod ifakiwe.
Siza kuvula i-Odin kwakhona, ukuba besele siyivulile ngaphambili, besiza kuyivala size siyivule kwakhona, ngeli xesha siza kubeka ifayile ngaphakathi kwifolda CF Ingcambu, kwicandelo PDA Odin, kwaye asizukukhetha ezinye iifayile.
Siza kujonga loo nto Ukwahlula kwakhona akuhloliswanga ngeli xesha, ezinye iindlela ezimbini kufuneka zikhethwe, ukuze kungathandabuzeki ukuba ndidibanisa umfanekiso-skrini wendlela yonke into ekufuneka ijonge ngayo ngeli xesha:
Nje ukuba uqinisekiswe ukuba yonke into injengasemfanekisweni oqhotyoshelweyo, siza kucima i-Galaxy kwaye siza kuyibuyisela emva Imowudi yokukhuphela, xa sele ivuliwe siya kuyidibanisa nePC kwaye siya kukunika ukhetho Qala kwifestile kaOdin.
Ngeli xesha inkqubo iya kuthatha ngaphantsi komzuzu, kwakamsinya nje ukuba u-Odin asibuyisele igama Kudlula, sinokunqamula ifowuni yethu kwikhompyuter kwaye siyilinde ukuba iqale kwakhona.
Ngale nto siya kuba nayo Ujikelezisile, i Ukubuyiselwa kwakhona kwaye ihlaziyiwe kuhlobo Inkqubo ye-Android 2.3.6.
Hlala ubukele iimpapasho ezintsha njengoko ndiza kukubonisa eyona Roms ifanelekileyo kwisixhobo sethu, zombini Gingerbread njengakutshanje Isandwich yeCream Cream nge I-Android 4.0.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Isamsung ayizukuyihlaziya i-Galaxy S yayo nayiphi na ipakethi yexabiso
Khuphela - Kies, odin, firmware, ICFRoot, Umngxuma 512.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Galaxy S, hlaziya nge-odin kwi-firmware 2.3.6 kunye neCF Root yayo
Izimvo ezi-354, shiya ezakho
Oku kusebenza ngama-9003? Ukubulisa
Ayisebenzi, i-terminal nganye ineefemu zayo
Ndenza njani ukuba ndibeka iselfowuni kwifomathi kwi-odin kwaye umgca oluhlaza awenzeki… c ah Ihlala iphawuliwe, ndenza ntoni xa kunjalo 🙁
Ndiyabona ukuba iposti ineminyaka eliqela ubudala kwaye andazi ukuba uza kuwubona lo myalezo.
Eli lixesha lokuqala ukuba ndifumene inkcazo ehambelanayo yendlela yokufumana kwakhona i9000.
Ngendlela, ingxaki yam iqale xa ndiphelelwe yinkonzo. Kuya kuvela ukuba i-IMEI itshintshele ku-00499… ..
Konke oku kuza kuba ndizama ukujikeleza (i-superuser) kwaye ayizukundivumela. Ukuba unayo nayiphi na ingcebiso ndingayivuyela kakhulu.
Imeyili yam: aantunez@tsj-dem.gob.ve.
Ndiyenzile le fowuni yam kwaye yafa ibiyi-9003,
Ukuqala kwesi sifundo kukwiGlass S, okanye i-GT-i9000, njengoko sele uqalile ukukhanyisa i-gt-i9003. Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukujonga ukuba ngaba iyasebenza imodeli yakho.
Jonga ukuba usenakho ukufikelela kwimowudi yokukhuphela, ukuba kunjalo ungaphinda uyilayite kwakhona ngefirmware echanekileyo.
UIsmael Moraño sitsho
Andikwazi ukunika ubomi kwiselula yam Yenzeka kum ngokufanayo kuninzi lwenu. Ifowuni iyacima kwaye andinakukuvula kwakhona, nkqu nakwindlela yokukhuphela! Ndiyathemba ukuba umntu uza kundinika isisombululo! 🙁
Phendula u-Ismael Moraño
ikhonkco kwingcambu yeCF yaphukile ... nayiphi na enye indlela?
ubisi! Kutheni le nto ucime uhlaziyo kwi-ICS post?
akukho joaquin, ayilunganga nge-9003
Ikhonkco lefayile yeCF alisekho, ngaba ungayiphinda uyiphinde?
Sele ilayishwe kwakhona
Umntu othile uyazi ukuba kutheni ithatha ixesha elide, okt njengemizuzu engama-20 ndisayile i-SBL kwinxalenye ephezulu yasekhohlo kwaye ibha yomnyele wam ihamba ipesenti encinci, ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba kutheni ?? ndenze ntoni? Ndingabulela kakhulu.
Ndiyigqibe kanjani into mfondini, uqale kakuhle?
Ifayile yeCF ayisasebenzi
ISanchez 992 sitsho
Indixelela ukuba ndiyadlula, kodwa xa iqala ukuvela kwiscreen KWISETYULI ZOKUSETYENZISWA KWESKRAYI kodwa isikrini asisebenzi ngokucacileyo ngenxa yoxinzelelo kwaye asinikezi mpendulo, ndenza ntoni?
Phendula iSanchez 992
Yeyiphi imodeli yefowuni onayo?
intle kakhulu yonke into, ingcaciso egqibeleleyo.
Yonke into ibigqibelele kwaye ngexesha elifutshane kakhulu, enkosi kakhulu.
Enkosi!!! Yonke into isebenze ngokugqibeleleyo… inye kuphela into andazi ukuba kutheni, kodwa i-3G ayisebenzeli mna… andazi nokuba kungenxa yohlaziyo okanye kungenxa yokuba kukho into engalunganga… ndingavuya naziphi na iingcebiso !!! SAlu2
Kwimeko apho iyakusebenzela.
I-3G ibingandisebenzeli nayo kwaye into endiyenzileyo kukufowunela inkampani yam (i-Euskaltel) kwaye ngomnxeba siqwalasele icandelo le »Inethiwekhi eziSelfowuni- Amagama endawo yokufikelela -Yenza indawo yokufikelela entsha» ndaza apho ndagcwalisa idatha bebendixelela, ngoku i-3G iyandisebenzela.
Miguelangel 25 sitsho
Ndinengxaki ebonakala imbi kakhulu. : S
Isilele ukufaka i-CF ROOT kwaye ngoku ayindiqali. Ndibona i icon yefowuni ephathekayo edityaniswe kwiPC enophawu lobungozi (unxantathu omthubi onophawu lwesikhuzo) phakathi kwabo. Ndizama ukuyicima, yiya kwimowudi yokukhuphela ... kodwa akukho ndlela. Ndisuse ibhetri kodwa xa ndiyibuyisela, i icon evuyayo iyavela kwakhona.
Ewe, ndikwazile ukuphuma kwisitena esitena ebendisingenisile. Ndisuse ibhetri kunye neSIM malunga nesiqingatha seyure. Ndibuyisele ibhetri ngaphakathi (hayi iSIM) kwaye ndazama ukungena kwimowudi yokukhuphela. Isebenzile kum. Emva koko ndibuyisele kwakhona i-firmware 2.3.6 kunye ne-Odin kwaye ifowuni iyavuswa. Andazi apho ndinokuthi ndenze khona impazamo kodwa emva koloyiko ndicinga ukuba andizukuyifaka i-CF ROOT 🙂
Kulabo bavela kwisitena sesitena esinomfanekiso kanxantathu kunye nekhompyuter, okanye abo baneengxaki ngenkqubo ye-sbl, ukuba ukufakelwa kwi-odin akusahambeli phambili, nantsi ndikushiya isifundo esihle kakhulu http://www.carvax.com.mx/2012/01/26/reparar-galaxy-s-i9000t-de-semibrick/
Kwaye ukuba asinakho ukufikelela kwimowudi yokukhuphela?
Molo jonga, ndiyenzile yonke into ndilandele amanyathelo de kube isikrini siba mnyama kwimowudi yokukhuphela xa i-odin igqibile, kwaye ndayikhupha. ngoku ayivuli, ayibizi kwaye ayibonisi iimpawu zobomi. Ngaba oko kungalungiswa?
Ngaba i-odin ikunike i-PASS?
Kwenzeka into efanayo kum: Ndiyayazi into oyenzileyo ???
Kwenzeka into efanayo kum njengoko uyilungisile
Ukuze uqhubeke uphila kufuneka ulandele imiyalelo, kodwa xa ukhupha ibhetri, uyivule ngokudibanisa amaqhosha kwaye ukhuphele apho uzakuvela kwakhona. Uyaqhubeka nokufaka okuseleyo- ayifanga !! ! kuphela kwikhoma hehehej yeelzu_22hot
Ndiyivuselele kodwa ngoku inethiwekhi ayindiboni, ndingatsalela umnxeba kodwa andikwazi ukusebenzisa i-Intanethi andikwazi ukumisela imeyile yam konke konke? Ndingenza ntoni?
Ngenisa uqhagamshelo ngaphandle kwamacingo kwaye uqwalasele idatha ye-APN, ukubiza umsebenzisi wakho ukuba abanike.
mhlobo yintoni iphasiwedi ye-firmware ??? del pda, ifowuni kunye ne-csc ukuvula ifayile ye-rar
samfirmware.com, uyibeka eposini
Yintoni oyenzileyo ukuyisombulula, ewe, inesisombululo
qwalasela ii-APN kuseto lwenethiwekhi
Wenzeni? Kwenzeka into efanayo kum izolo ...
ingxaki kukuba imodeli yekhompyuter yakho ayifani nale ikule post, kwenzeka into efanayo kum, isihloko sale post asicacanga, ungazenza ezo mpazamo, ikhompyuter yam ngumthala S gt- i9003, le posi yenzelwe imodeli ye-gt-i9000. Uxolo ukukuxelela ukuba izitena zefowuni bazilungisa kwaye ukuzilungisa kuya kufuneka usebenzise isekethe ekhethekileyo eqhagamshelwe kwintambo yefowuni ye-USB. Njengoko bendiyithengile iselfowuni kutshanje, ibisenayo iwaranti, ndiye ndayisa kwinkonzo yezobuchwephesha kwaye bathi bakufumanisa ukuba sisiphoso esisengqiqweni esifutshane, bayitshintshela kwenye.
Molo, sele ndinayo i-mobile up-to-date kwaye yonke into isebenza kakuhle, kodwa xa ndifuna ukukhuphela iCF Root, kubonakala ngathi kufanelekile ukuba idityaniswe nenye inkqubo, kulungile, ndiyayikhuphela le nkqubo, ndifake yonke into ngaphandle kwe I-CF Root ayikho ndawo, ungandinceda ... ..
Ndihambile kwi-super novice ukuya kumsebenzisi omkhulu ngokukhawuleza! Kodwa ndinengxaki efanayo ne-bonilla18luis, kwaye ngaphandle kokuba isebenze ukuzula ayidibanisi nenethiwekhi, nakwiinethiwekhi zeselfowuni ndinxibelelana nenethiwekhi yam (iBoda fone) kwaye ihlala injalo ... (http://www.vodafoneteayuda.es/2011/12/habilita-la-conexion-a-internet-en-tu-terminal-con-android/Andikwazi ukuyenza nokuba ... ndingasebenzisa uncedo oluncinci!
Imibuliso evela kwiRaval kwaye enkosi kakhulu !!!
Kwi-BLOG unePosti yendlela yokumisela i-apn
Nge-06/11/2012 ngo-04: 35, «Disqus» wabhala:
UPaola Dominguez sitsho
Andinalo olo khetho !!! ndenze ntoni
Phendula Paola Dominguez
Yiya kuseto / ngaphandle kwamacingo kunye nothungelwano / uthungelwano lweMfono / i-Apn kwaye wenze i-APN entsha enedatha oya kuthi ikunike inkampani yakho.
Nceda wenze onke amanyathelo kwaye ndivule kwaye ndingene kwiscreen ikhibhodi kwaye ayindivumeli ukuba ndiqhubele phambili
ngaphakathi kwifolda ye-CF ROOT SALE ZIMAGE, KODWA AKUKUVUMELEKI UKWENZA Nantoni na kwi-Odin… NGABA UNOKUPHOSA KWAKHONA?
Kungenxa yokuba uyivula kwifayile ye-.tar kwaye akufuneki uyivule, kufuneka usebenzise i-cfrootxxxxx.tar kwi-odin.
Kwenzeka into efanayo kum kwaye andazi ukuba ndiyilungisa kanjani.
I-Cfroot ayisiyo folda, yifayile ye-.tar, kwaye yona kuya kufuneka uyisebenzise ngokuthe ngqo kwi-odin.
UVictor Andres Delgado Ramirez sitsho
Molo, molo olungileyo mhlobo, umbuzo ndiyifakile le nguqulo amaxesha ama-3 kwaye into eyinqaba kakhulu isoloko isenzeka kum ndifunde phantse zonke izimvo kwaye ndicinga ukuba yenzeke kum kwaye yinto elandelayo xa ndicima izixhobo okanye uyiqale kwakhona emva kokuyilayita Ngaphandle kwesandi semultimedia, ndiyathetha, intsimbi iyakhala xa kungena umnxeba. Izaziso zikaFacebook nezinye izinto zencoko ekuphela kwento engavakaliyo yivolthi yemultimedia kunye nevolumu yenkqubo, isaziso kunye Umnxeba ongenayo, usebenza ngokugqibeleleyo kwaye andazi ukuba Wenza ntoni ukuba uyazi ukuba kwenzeka ntoni nceda undincede ndicinga ukuba luhlobo olulungileyo kuba ndifakele abanye kwaye le yeyona nto ilungileyo kwimbono yam enkosi kakhulu ukuba uyafuna ndincede undongeze kwi-fb yam victor860609@hotmail.com Enkosi kwaye Malunga
Phendula kuVictor Andres Delgado Ramirez
Xa uqala kwakhona, icela igama eligqithisiweyo, ithi qinisekisa igama eligqithisiweyo.
Ndicinga ukuba iya kuba nguSim
kakuhle yonke into ihambe ngokugqibeleleyo !!!!! ngoku i-SGS yam iye yaqatshelwa ebusweni, umhleli weefoto, ii-sg2s zivula kwaye zithatha iifoto kwaye zirekhoda iividiyo ezilungileyo tuto ngoku ndiya kwiposti yohlaziyo osandula ukuyilayisha !!!! Halala !!!!
Mholweni!! Ndinengxaki encinci kuyo yonke le nto, kwaye andazi ukuba indibeka kwimowudi yokukhuphela, kuba ndenza combo yamaqhosha amathathu kwaye ndifumana imenyu ngaphandle kokukhuphela ukhetho kwaye ndingayifumani i-android nefosholo, nkqu ke ndiyibeka kwi-odin iyifumanisa kum, ndibeka yonke into endaweni yayo ndiyinika ukuba iqale kwaye yonke into iqala ukusebenza kodwa ihlala isetwe kunxibelelwano .. ukuze uncamathisele iiyure. Ndingenza ntoni, enkosi kakhulu !!! Ndikushiya imeyile yam iavp79@hotmail.com. Enkosi kwakhona
Ngokuchanekileyo kwenzeka into efanayo kum, yabanjwa kwiSetupConnection kwaye ayizukusebenza ...
Ndiziphendula ukuba kunokwenzeka isebenzele umntu. Iphasiwedi yile oyisebenzisayo ukuvula isikrini (kungekhona ipini yenethiwekhi yeselula)
Ngaba unaso isiphelo sendlela esimiselweyo?
Ngokubhekisele kule ngxaki, ndinesiphelo sendlela ejikelezayo kwaye sihlala kuseto, yintoni endinokuyenza?
Molo, ndenze inyathelo lokuqala kwaye isikrini sam saya kumnyama kwaye kucingelwa ukuba kufuneka siqale phantsi, ndenza ntoni ngoku?
tshomi wenze ntoni Kwenzeka into efanayo nakum
Kwenzeka into efanayo nakum….
jair alfonso ramirez sitsho
bakwazile ukuyilungisa loo nto?
Phendula ku jair alfonso ramirez
ingxaki kukuba imodeli yezixhobo zakho ayifani nale ibonakala kwesi sithuba, kwenzeka into efanayo kum, isihloko sale post asicaci, ungazenza ezo mpazamo, izixhobo zam ngumnyeleza S gt-i9003, le posi yenzelwe imodeli ye-gt-i9000. Uxolo ukukuxelela ukuba izitena zefowuni bazilungisa kwaye ukuzilungisa kuya kufuneka usebenzise isekethe ekhethekileyo eqhagamshelwe kwintambo yefowuni ye-USB. Njengoko bendiyithengile iselfowuni kutshanje, ibisenayo iwaranti, ndiye ndayisa kwinkonzo yezobuchwephesha kwaye bathi bakufumanisa ukuba sisiphoso esisengqiqweni esifutshane, bayitshintshela kwenye.
ILluís Aguilà Fosch sitsho
Phendula uLluís Aguilà Fosch
Kwi-Samsung Galaxy S Captative i897 ngaba le nkqubo inokwenziwa? Kungenxa yokuba ndifunde i-GT-I9000 apha ngasentla kwaye kuba ndimtsha kule nto, andinalwazi malunga neefowuni zeAndriod. Ngaba umntu angandixelela ukuba ndine-firmware 2.3.5 ndingayilayisha kwi-2.3.6 ngale ndlela?
Phendula kwii-Ocons ngo-2009
awukwazi, zizixhobo ezahlukeneyo.
Ayisiyiyo le-GT-i9000 kuphela
umbuzo xa ubuyisela ingcambu iya kususwa yonke idatha kunye nokusetyenziswa?
Njengabaninzi abathumele apha ngezantsi, emva kokuba i-PASS iphume kuhlaziyo lwe-android, yabambeka kwaye emva koko ayizange ivule okanye inike nayiphi na imiqondiso yento, ndayisusa ibhetri, ndazama ukuphinda ndiyifumane kwaye ndiyikhuphele kwaye ayiniki mqondiso. ! Ndingenza ntoni: S
Ndine-Samsung Galaxy S kodwa inguqulelo ene-Digital TV Tuner. Ukuba ndisebenzisa le nkqubo, ngaba ndiza kuqhubeka nokufikelela kumabonwakude? Ndiyabulela kakhulu!
Andikholelwa, mhlobo wam, yonke into engenguye uhlaziyo olusemthethweni, andikholelwa ukuba iyasithwala isicelo, andazi neso.
Ngapha koko enkosi ngokundiphendula.
UJose A. Peters sitsho
Kulabo bakwisitena semiqobo kufuneka wenze onke amanyathelo okufakwa kwefirmware kwaye ekugqibeleni ungenise useto lwefowuni kwaye ubeke usb ukulungisa kwakhona kungenjalo ingcambu ye-cf ayiyi kubamkela Odin
Phendula kuJose A. Peters
Molo onke amanyathelo, xa ndicimayo iselfowuni isikrini sasibumnyama kwaye asiphenduli… Ndisusile ibhetri kwaye ayiphenduli okanye kwimowudi yokukhuphela
Masiphumle ithutyana ngaphandle kwebhetri kwaye sibuyele kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, kwaye sikhanyise yonke into kwakhona, sinike ingqalelo ekhethekileyo kwi-flash yokuqala yokumakisha ukwahlula kwakhona, kwaye okwesibini, oko kukuthi, kwiKernel okanye i-cfroot, ukuba sukumakisha, ndiyaphinda ndiyakumakisha ukwahlula kwakhona
Stephi veronik sitsho
molo ndinomdlali wegalaksi (ypg70) kwaye kwiveki ukuza kuthi ga ngoku ayidlali imultimedia; Awudlali umculo (uyaphazamiseka kwaye kuvela impazamo kwisicelo), izilumkiso azivakali, andikwazi ukurekhoda ilizwi okanye ividiyo, ayidlali iYouTube (kukho isikrini esimnyama) okanye unomathotholo. Kufanelekile ukuba ndikhankanye ukuba ndineeveki ezi-3 ndinaye, bandinike yona (ukuba andinayo i-invoice yokuyithumela kwinkonzo / kwiziko lewaranti) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ixabiso leefektri kwaye akukho nto ingalungiswanga ingxaki …………. ungandinceda?????
Phendula uStephi Veronik
Ngaba ingena kwimowudi yokukhuphela?
Ukuqala ngesiphelo sendlela, yivule ngokucinezela amaqhosha eVolumu ezantsi kunye nekhaya kunye namandla, kwaye undixelele ukuba ubona uphawu olutyheli kunye ne-Android phantsi kolwakhiwo.
Ndilandele imiyalelo ezantsi kweleta kwaye ukuchukumisa akusebenzi…. nceda nceda.
UAntonio Duran sitsho
Iscreen sokuchukumisa asisebenzi…. Ndifumana iphasiwedi yokuqinisekisa kwaye andinakwenza nto, ndiyicime kwaye ibuye. ndicela uncede
Phendula u-Antonio Duran
Phinda uphinde ukhanyise kwasekuqaleni unike ingqalelo kuwo onke amanyathelo.
Into ondixelela yona ngegama elingephi andilivanga ebomini bam.
Kwenzeka into efanayo kum, uyisombulule njani?
Andazi ukuba uthetha ukuthini, khankanya okungakumbi.
Nangona kunjalo, ndiza kuphinda ndikhanyise.
USergio Castillo Yrizales sitsho
Kwenzeka into efanayo kum, i-touch screen ayisebenzi, nokuba uyinika kangakanani kwaye uyinika, i-touch screen ayiphenduli ... uyazi ukuba kukho isisombululo?
Phendula uSergio Castillo Yrizales
Ngaba kunyanzelekile ukuba ube yingcambu?
Ngaba ufuna ingcambu?
Akukho mhlobo uyimfuneko
Molo, ndikhuphe i-s2 kwaye andikhululekanga evenkileni. kodwa uphawu lwe = Android esebenzayo.isilumkiso kuphela esivela…. njl njl.ndingayenza ntoni nceda?
Ungayivula ngokwakho iSamsug Galaxy S ngokwakho ngeGlobal Unlock oya kuyifumana kwiVenkile yokudlala.
Umbuzo, ndenze yonke into kwisifundo, oku kuyenzeka:
OSM> MODEM_I9000XXJVU_REV_00_CL1092175.tar.md5 iyasebenza.
Injini ye-Odin v.3 (ID: 4) ..
Bahamba malunga nemizuzu engama-20 kwaye khange kushukume kwaphela, iqhubeka isithi SET SECTION kwibhokisi engasentla kwaye ayilayishi nto .. kufuneka ndihlale ndilindile okanye ndenze ntoni?
I-PS: Yi-Galaxy S 9000
Ndinengxaki efanayo nale uyibonisileyo
Imenyu yokuseta / unxibelelwano / uthungelwano lweselfowuni / i-apn, ukuba kule ndlela akukho khetho luvela kuyo, cofa ukongeza i-APN entsha kwaye kukhetho lokuqala ubeke i-intanethi yeYoigo, emva koko kwindawo yesibini ubeke i-intanethi, cinezela iqhosha elingasemva kwaye ukhethe i-APN leyo sidale nje, ukuqala kwakhona i-Galaxy kwaye isonjululwe ingxaki. Ndiyathemba ukuba izokusebenzela ngendlela endizame ngayo u-4 kodwa kwiminxeba ene-viber khange bandive kodwa bendibiza ngesiqhelo ukuba iyasebenza, ndizamile nezinye iinkqubo kwaye akukho nto ihamba njengombuliso wenguqulo 4
Ndenze yonke into njengomhlohli, u-odin undinika ukupasa, iseli lihlala kwiscreen esimnyama, susa ibhetri kwaye ayivuleki okanye ikwimo yokukhuphela, ndicela undilahlele, kwiiveki ezi-2 ezidlulileyo ndiyithengile
Umkhulu kakhulu ndoda, ndiyenzile ngokutsho kwakho kwaye bendingenangxaki.
Enkosi kakhulu kunye nombuliso omkhulu kakhulu.
Phendula Phendula Malague91
Ndilandele amanyathelo akho kwileta kwaye isikrini sokuchukumisa asiphenduli ...
Kwenzeka into efanayo kum, ndifuna ukwazi ukuba ndenze ntoni, ifowuni yam ithi qinisekisa iphasiwedi… kwaye ukuchukumisa akusebenzi kum.
kurai zafi sitsho
Kwenzeke kum ngokufanayo !!!!!! Ngaba ungayilungisa? T____T
Phendula kurai zafi
Kwenzeka lento inye kum wn .. abakayilungisi ???
UJhon Eduardo Carranza Pacheco sitsho
indlela abayilungise ngayo esihogweni: '(eyam yeyesamsum galaxy S i9000
Phendula Jhon Eduardo Carranza Pacheco
Umbuzo, Ndiwenza njani umsebenzi wothungelwano lwedatha? Ndiyayivumela kwaye ayiveli ... andikaze ndibenaso isidingo sokumisela nayiphi na i-APN kuba kwaisisixhobo esinye esixhume ngokuzenzekelayo inethiwekhi yedatha, kwaye ukuba ndongeza i-APN indibuza iinkcukacha ezingenalo nofifi, ayizubakhona indlela Ngendlela, isisele sam simahla…
Fowunela inkampani yakho ubuze ulwazi oluchanekileyo, ngekhe bakunike ngxaki.
Ndenze yonke into kwaye ngoku ukubamba akusebenzi kum .. (touch screen) xa ndiyivula ukuze ndiqwalasele andinakwenza nantoni na endiyenzayo.
Yintoni imodeli yesiphelo sakho '
ULyzeth Linares Sandoval sitsho
UFelipe ndiye ndahamba nje ngetyala lakho, isikrini sam besifile kuba sivulekile kodwa khange sisebenze ukubamba kodwa ngokumangalisayo ndiyifumene le vidiyo kwaye isisisombululo!
Phendula uLyzeth Linares Sandoval
Izolo ebusuku iselfowuni yam ibhajwe kwiscreen sasekhaya, khange ihlawule okanye nantoni na. Khange iye nakwimo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, kodwa ikwenzile ukukhuphela.
Ndilandele ekhondweni lakho kwaye enkosi kuwe mobile yam ivukile.
Molo ndingathanda ukwazi ukuba le rom iyasebenza na kumthala we-GT-I9000t
Akukho mhlobo kule rom yey i9000
Enkosi Mhlobo, ungacebisa nayiphi na i-rom yesisele sam. kuba ndifuna ukuvuselelwa ndine-vers. froyo 2.1.1.
Khangela iQela RemICS-UX ekwibhlog
molo mhlobo uyazi ukuba ndingayifumana phi i-ICS rom ye-gt-i9000t yam kuba ucacisa ukuba ayisiyiyo le fowuni… enkosi!
UJuan Carlos Rosales umfanekiso wokubamba sitsho
Molo mhlobo olungileyo, ndiyakuxelela ukuba ndibeke umngcipheko ndafaka i-rom nangona undixelele ukuba ye-GT-i9000 kodwa ke ndiyifakile kwaye i-rom iyandisebenzela kwi-Gt-i900t yam, isebenza ngesiqhelo.
Phendula uJuan Carlos Rosales
Ndonwabile ukuba iyakusebenzela, kodwa ngaba yonke into ilungile?
UJuan Carlos Rosales (ongabhaliswanga) wabhala, ephendula uFranciscoRuizAntequera:
Idilesi ye IP: 186.32.65.141
Andazi ukuba ndenza into engalunganga, kodwa ndilandele amanyathelo kwileta kwaye xa uhlaziyo luqala kwi-ODIN luxhomekeke kwi "boot.bin". Umgca wenkqubela eluhlaza okwesibhakabhaka kwisiphelo sam awugqithanga kwinto ekufanele ukuba iyi-2% Ndizamile kwakhona ngokufanayo. Ndingenza ntoni ukuyifumana kwakhona?
Ndizamile nje ukuyifaka kumthala S gt-i9003 kwaye yafa
Kuya kufuneka ndisebenzise isiqinisekiso kwaye ndithi andikaze ndiyichukumise, kodwa ke
Sele ndinamava okuba nayiphi na i-rom ayisebenzi nokuba ngumnyele uS
Yenze icace gca ukuba yeye-GT-i9000, jonga ukuba uyakwazi ukufikelela kwimowudi yokukhuphela kwaye usenakho ukuyigcina.
Andinakho ukufikelela, ufile ...
Umhlobo uwalandele onke amanyathelo kwaye xa ndisebenzisa ii-aplikeshini ezininzi kwaye ndisiya kwiscreen esikhulu ihlala iluphu ukuba isikrini siba mnyama kwaye iphepha lodonga liphuma kwakhona kwaye ngokungenasiphelo ingaba sisisombululo sini?
isilvina garrido sitsho
Ndilandele onke amanyathelo kwaye xa kwi-ODIN ndiyinika Qala indibonisa umyalezo wewindows (umnqamlezo obomvu) obonisa indlela kunye nefayile ye-CODE kunye neqhosha elilungile. Ukuba ndiyamkela ... ihlala ihleli njengoko isebenza kwaye kwibhokisi yomyalezo we-ODIN ibonisa Nceda linda .... Ndilinde ngaphezulu kwemizuzu engama-20 kwaye akukho nto ibonakala ngathi icwangcisa into ... kufuneka ndenze ntoni ??? Ukuba andicinezeli YAMKELE, ayenzi nto nokuba ...
Ngaphandle kwezindululo zokuba andichukumisi nto ... emva kwemizuzu engama-20, ndithathe isigqibo sokuvala i-ODIN, ndicime iselfowuni ... kwaye yonke into ihlala ifana naphambi kokuba ndiqale, ndiyathetha ukuba imisebenzi yam yeselfowuni kwaye kodwa awuzange bona ukuba ihlaziye i-firmware. Iselfowuni yam yiGPS S I9000
Ndiyathemba ukuba ungandinceda… ..
Phendula i-silvina garrido
Ngaba ubeka iselfowuni kwimowudi yokukhuphela?
INavarrogarca Jason 71 sitsho
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba ngaba iSamsung inesifundi selizwi njenge-iPhone ebizwa ngokuba yi (VoiceOver), esi sicelo senzelwe abantu abanombono ophantsi.okanye hayi kuba sikhetha i-samsung ... nc ukuba le sicelo se-iphone siphantsi kwelinye igama, enkosi kwangaphambili ngempendulo yakho ...
Phendula kwiNavarrogarca Jason71
Ukuba emva kokuhlaziya ukuya ku-2.3.6 kunye nokubuyisela usetyenziso, i-cf ingcambu ibekiwe, Ngaba idatha ebendinayo kwiselfowuni ilahlekile?
Andikaze ndiyenze ngoluhlobo, kodwa ithiyori akufuneki ulahle nayiphi na idatha okanye usetyenziso
Ndiyenzile nje. Ndineengxaki nge-3g, kodwa ndatsalela umnxeba inkampani yam (iMovistar, eChile) ndayisombulula. Nangona kunjalo, ifowuni ngoku ayifumani nethiwekhi ye-Wi-Fi. Ndingenza ntoni?
Yonke into igqibelele, enkosi !!!
Molo mhlobo, ndinombuzo omnye kunye nengxaki e-1, eyokuqala kukuba ibhetri kufuneka ikwi-1% (kuba iselfowuni yam ngenxa yezizathu ayibizi i-100% ubukhulu bayo indishiya nge-100% kwaye ke ayenzeki) mna cinga ukuba kufanele ibhetri okanye isizathu.
Enye ingxaki kukuba ndizamile nje ukubona ukuba idityanisiwe kodwa iyandiphawula ukuba ayisamkeli isixhobo kwaye ndizamile kumazibuko aliqela kwaye akukho nto (ndinabaqhubi be-kies abafakiweyo, sele ndiyidibanisile amatyeli amaninzi kuloo nto indlela, ndenza ukulungisa ingxaki, kwaye ndivale yonke into enento yokwenza neekie ngumphathi womsebenzi kwaye ndiyenza kwimowudi yokukhuphela)
Ndicinga ukuba sithetha ngemodeli ye-Samsung Galaxy S yeGT-I9000?
Umhlobo oqinisekileyo, yi-GT-I900T kwaye ndine-firmware 2.3.3 ene-GINGERBREAD.UMJV2 yiyo loo nto ndifuna ukuyivuselela kodwa iyandisebenzela yiyo loo nto ndiye kuwe.
I-GT-I9000T ayisiyiyo i-GT-I9000, esi sifundo siyazanywa kwaye savavanywa kwi-GT-I9000, ke andazi ukuba mandikuxelele ntoni kwisiphelo sakho, eyona nto intle kukuba uyeke nge-sammobile kwaye ukhuphele yonke into kufuneka ukhanyise imodeli yesiphelo sakho.
Kulungile ke, enkosi ngexesha lakho, ndiyalixabisa kakhulu.
Odin, igama COM lilandelwa linani aliveli xa uqhagamshela kwimowudi yokukhuphela?
Hayi, ndiyayibeka kwaye njengoko isitsho kodwa indiphawula ukuba ayisamkeli isixhobo kwaye ayikaze ibhaqe i-COM.
PS.- Ndizakuzama ukubona into endiyenzayo kodwa ngokoluvo lwakho ukuba iyakwazi ukudibanisa, ucinga ukuba ayongxaki nebhetri endiyikhankanyileyo?
I-samsung galaxi ace vale callampa
Kulungile ukuba ujonge isihloko senqaku esi sifundo se-Samsung Galaxy S hayi eye-Samsung Galaxy ACE.
Ndenza njani i-fuck ukuba ifowuni ayivuli emva kofakelo lokuqala ?????
Ifowuni yakho iya kuba yimodeli yeGPS S iGT-I9000, akunjalo?
ayuuuuuuuuuudaaaaaaaaaaaa !! Ndiyifakile le nguqulo ye-galaxy s kodwa ndayifaka kwi-galaxy s kwaye ngoku ayinakundibeka kwimowudi yokwehlisa kuba ayifani ... Ndifuna ukuyibuyisela kwimeko yayo yokuqala ye-galaxy s .. .. Ndiyathemba ukuba ungandinceda 🙂
Uyilo lweAxelflorido38 sitsho
iselfowuni khange ivuleke emva kokupasa kokuqala ... yafa! Ndenza ntoni man!?
Ndikwenzile oku kwi-i9003 ndikholelwa ekubeni yayiyile firmware, ndiyathetha, kwisamsung galaxy scl kwaye ayiqali okanye ingene kwimowudi yokukhuphela !!! Into endinokuyenza!? ingxamisekile nceda
Kwenzeka into efanayo kum, isihloko sale post asicacanga, ungazenza ezo mpazamo, njengoko bendisandula ukuyithenga iselfowuni kutshanje, isenayo iwaranti, ndiye ndayisa kwinkonzo yezobuchwephesha kwaye xa ndafumanisa ukuba Kukungaphumeleli okusengqiqweni kwisekethe emfutshane, bayitshintshele entsha.
Ewe, fuck wena, kuya kufuneka ufunde, ubusazi?
Kwabaxeli abangengabo oosiyazi abafana nam: Khange ndiqonde ukuba ndibeka phi ifayile nganye, okt i-csc, imodem, njl kwaye kungenxa yokuba le fayile ayinazo, inefayile ye -tar kuphela ekufuneka ibekwe ngokungathi zonke zikwi-PDA, qala kwaye yiyo. Ndiyathemba ukuba izokusebenzela umntu, kuba bambalwa abaphumeleleyo abaxhasa abo banamathandabuzo. 🙂
Kodwa undixelela ntoni, isifundo sineenkcukacha ngenyathelo ngenyathelo kwaye ngaphakathi kwefayile ecinezelweyo zonke iifayile endizichazayo kwisifundo.
Nge-10/08/2012 ngo-23: 06, «Disqus» wabhala:
Molo ndine galayx s i9000 2.3.6 evela kwi-movistar kwaye ndingathanda ukwazi ukuba ndingayifaka ngqo i-cf-root JVU kernel kuyo kwaye ukuba iyayixhasa inguqulelo yam ye-baseband I9000BGJV2, inguqulelo yeKernel 2.6.35.7-I9000BGJV6-CL783990 ingcambu @ DELL132 # 2 okanye kufuneka ndifake i-firmware ye-2.3.6 JVU kuqala?
Mva kwemini ndifuna uncedo…. Ewe, ndiwalandele onke amanyathelo ileta, kwaye ifowuni yam iqhagamshela kwi-odin, iwindow yoxande ibonakala imthubi ngenani ecaleni kwayo, ndicofa iqhosha lenkwenkwezi kwaye inkqubo iqala, kodwa iya phambili kuphela ukuba ubuncinci i-2 % kokubini kwi-odin nakwifowuni ... ngaphezulu kwefestile etyheli kwisikwere esikhulu kuvela oonobumba be-FACTORYFS ,,, emva kwemizuzu eli-15 kungekho nkqubela phambili ... ingaba yintoni isisombululo kwingxaki yam ???? NDIYABULELA KWANGOKO …. UKULINDELA UNCEDO LAKHO….
Ayikwazi ukuvula uthotho lwezibuko (COM).
Yintoni ingxaki?? : S
Khuphela uhlobo lwakudala lwe-odin
Ngaba inguqulelo yangaphambili yeODIN ikuncedile? Kwenzeka into efanayo kum kwaye andazi ukuba ndenzeni? uyisombulule njani?
Yiya kwinkqubo kwakhona, uqaphele ukuba ubeka phi iifayile. Kunye nokumakisha ukwahlula kuqala kwaye emva koko xa kubekwa uphawu kumanqaku
Yonke imisonto igqityiwe. (phumelela 0 / usilele 0)
Ngaba sele idlulile ??? kulungile? .. ndixelele into xa unako
Ukuhlaziywa ngokugqibeleleyo !!! akhongxaki.
Ndiyabulela kakhulu nina ziinkwenkwezi ezimbalwa !!
Okokuqala, enkosi kakhulu ngolwazi kunye nomsebenzi wokubhala kwiiseva ezisasebenza. Ndiza kukuxelela, ndizamile ukukwenza oku ngefowuni yam malunga neeyure ezi-5 ezidlulileyo, bendiswelekile, ndenza ubumdaka, ndavuka ... , waba zombie ... umthwalo kakhulu ngokukhawuleza, kujongeka ngathi ukhululwe ngakumbi kuba nesikrini sokuqala somnikezeli asiveli kwaye sithi I900, ilayisha ngokukhawuleza okukhulu… ingxaki? Iscreen sokuchukumisa asisebenzi kum T_T ayiyiboni iminwe yam kuphela amaqhosha angasebenziyo ukuyilungiselela isikwere esi-8 ayitsho, faka ikhibhodi yokujonga, njl.
Andikhange ndiqonde nto ukuba kukho indlela elula yokundixelela nceda; _ (
Sihlobo, ungandixelela ukuba yintoni ipasi.
Nje ukuba onke amanyathelo enziwe, iyandicela ukuba "ndiqinisekise iphasiwedi".
Ayibuzi nakuphi na ukupasa, ngaba unayo ifowuni etshixiweyo?
Ndisebenze ngokugqibeleleyo ngenxa yam, yonke into ibilungile, enkosi ngeposi
Fuck ulumke ungangena njani kwizixhobo ze-lerus ezingama-500 ezinje nge-sambung galaxy 3, andikwazi nokucinga
Molo, yonke into intle kakhulu, ifowuni isebenza ngokumangalisayo kodwa ayithathi i-3g, sele ndiyilungiselele kwi-apn ndaza ndatshintsha ibhendi yedatha kuleyo yenkampani yam, umbono othile wokwenza i-3G ibuye
Yenza imowudi yokubhabha isebenze emva koko uyiyeke isebenze, ngako oku kuya kufuneka ufumane umqondiso.
Ndiyabulela kakhulu ukufundiswa, kusebenze ngokugqibeleleyo kum. Kuqala ndizamile ukufaka i-cfroot ngqo kuba bendisele ndinayo i-2.3.6 kunye nefowuni yam iswelekile ... i-XD indoyikisile kodwa ndiqale ukufundisa kwasekuqaleni kwaye ayindiphakamisanga nje ifowuni kodwa ndiyingcambu, enkosi kakhulu 🙂
Iphi ifayile yeCF Root endikhuphele kuyo inkqubo ekucingelwa ukuba ndiyincamathisele kwiCF Root kwaye andifumani ncedo nceda… ¿?
jonga esiphelweni sesithuba, kukho amakhonkco kuzo zonke iinkqubo kunye neefayile ezifunekayo, kwaye kulo lonke ixesha lokufundisa izihlandlo ezininzi ziyabandakanya. Ndikucebisa ukuba ufunde igama lokufundisa ngelizwi ukuba yonke into icaciswe kakuhle kwaye awubeki mngcipheko wokuyiqhekeza njengokuba bendenzile ekuqaleni 🙂
Duduaustin iTv sitsho
Molo HAYI NDICIMILE ICellular YAM KANYE NGOKU AYIJIKELI KUAAAAAAAAAAAAAAAAAH NDICELA UNDIXELELE UKWENZE
Phendula kwiDuduaustin Tv
yeyiphi ifolda eyiCF Root ...?
Kwenzekile kum njengoko besitsho apha ngezantsi, ikwabuza ukuba ndiqinisekise iphasiwedi, ewe, bendiyinqandiwe kuba bendicinga ukuba ibiwe kwaye inkampani iyivimbele i-imei, kodwa ndiyifumene kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwaye Ngelixa bayivulileyo bendicinga ngokuyihlaziya kodwa indibuza ukupasa, ukuba yonke into ihamba kakuhle ngoMvulo okanye uLwesibini ndiyivulile kuba bandixelele ukuba kuthatha iiyure ezingama-72 ukuyivula, ndingayicima kwaye xa ivuliwe ndingabeka i-cf ingcambu kunye nee-ics? Enkosi kwangaphambili, ngaphandle kwale ngxaki, yonke enye into ilungile.
Ikhompyuter yam ayisamkeli isixhobo kwimowudi yokukhuphela, ndingenza ntoni?
Jonga ukuba xa uvula i-odin ufumana igama elithi COM lilandelwe linani kwikona ephezulu ngasekhohlo.
Nge-05/09/2012 ngo-04: 51, «Disqus» wabhala:
Yeyiphi iphasiwedi evula iifayile ezixineneyo?
Phendula ku Sisco670
molo .. Ndinengxaki .. Andinazo naziphi iifayile ekufuneka ndizivulile
ifayile yekhowudi ye-firmware engafakwanga
ifayile ebizwa ngokuba yiCSC
nceda ndiyazidinga ngokungxamisekileyo
aziveli xa kuvulwa uziphu
Fumana i-zip phantsi
Nge-05/09/2012 ngo-19: 39, «Disqus» wabhala:
Ekugqibeleni emva kokukhutshelwa kathathu kwe-zip kunye nengxaki efanayo jonga elinye iphepha kwaye ndingalisombulula ... Ndingazikhuphela iifayile kwaye ndineselfowuni kwi-semi-lock kodwa sele isonjululwe kunye ne-Rom MIUI Jelly Bean 2.8.24 by muchopoli83 esebenza ngokugqibeleleyo.. enkosi kakhulu ngokuphendula kwaye enkosi ngokwabelana ngayo yonke le nto .. wenza umsebenzi omkhulu kwaye uqhubeke ...
Enkosi kuwe mhlobo ngenxa yendumiso yakho nenkxaso yakho nethemba.
Nge-06/09/2012 ngo-22: 54, «Disqus» wabhala:
Ndinombuzo: Ngaba kunokwenzeka ukuba i-IMEI ithathelwe indawo yile nkqubo? Ukuba kunokwenzeka ukuba ifolda yam ye-EFS icinyiwe yatshintshwa yenye, okanye into enjalo
Umbuzo wam uza kuba khange ndenze ikopi ye-efs (andazi ukuba bekude ndizazise kancinci) ngaphambi kokulandela isifundo, kwaye ngoku iselfowuni ilungile kodwa indiphawula ngokungathi bendizula, ngokungathi mna ibingaphandle kwelizwe lam lengqondo, kwaye ndiye ndaqaphela ngee kies ukuba ifemi endiyibekayo ngoku ithi (KOR)
Ngaba ndingahle ndilahlekelwe yi-IMEI yam okanye into enjalo kwaye ndinayo yohlobo oluqhelekileyo?
enkosi kwangaphambili, andinalwazi kakhulu kwezi zinto okwangoku
Ndilandele onke amanyathelo abawabekayo kwaye xa ndingena kwi-ODIM3 emva kokugqiba lonke igama i-PASS iselfowuni ayiyivuli ivaliwe.
Ndingenza ntoni, akukho ndlela yokwenza ukuba ivule
ifowuni yam yi-samsung galaxy s le nywele, ayizukundivumela ukuba ndiyibize ngegama ossuary
Phendula ku Youssef
Enkosi kakhulu malume, ibindigqibelele kwaye yonke into ichazwe kakuhle 😉 imibuliso kumatshini!
Ndiyabambeka emva kokusebenzisa iOdin. Into ye- "PASS" iyavela, i-mobile iqala kwakhona kwaye iqala ukufaka izinto, kodwa nganye nganye ijongeka njengonobumba obomvu othi "mount fail" kwi-drive E: kwaye ke ihlala apho ... kungenzeka ntoni?
Oko kukuthi inyathelo elithile olilelileyo, kwinyathelo lokuqala kufuneka ukhethe ukwahlulahlula, kwaye okwesibini, le le-CFRoot not.
Nika ingqalelo ukubeka ifayile nganye endaweni yayo.
Olu fakelo yisoftware esemthethweni yale modeli (GT-9000t) ????
Nge-11/09/2012 ngo-05: 30, «Disqus» wabhala:
Molo uFrancisco. ikhompyuter yam ngumnyele S. Ndenze ileta kwileta ... nangona kunjalo iselfowuni ithatha ixesha elide ukuqala, ngaphezulu kwe-5min kwaye ihlala kwi-gsm ... ayindidibanisi ne-intanethi.
Nceda ungandinika isandla.
Molo Fakela yonke into, kodwa ingxaki yam ibhekisele kwiscreen sokuchukumisa, siyacotha .. iphendula owesibini kunye nasemva kwento endiyenzayo. Nasiphi na isisombululo?
Ndiwenzile onke amanyathelo kwaye sele ndinayo i-SGS I9000 kwaye sele ndinayo ngo-2.3.6 ndinengcambu efakiweyo.
Ingxaki endinayo yeyokuba ngalo lonke ixesha ndenza okanye ndifumana umnxeba, ekupheleni komnxeba ndifumana le mpazamo ilandelayo: "Inkqubo ye com.andorid.phone iphazamisekile ngokungalindelekanga. Nceda uzame kwakhona" kwaye emva koko andinakufihla imizuzwana embalwa. I-Bluetooth indinika iingxaki kwaye kunzima kakhulu kum ukuba ndikwazi ukuyidibanisa nesinye isixhobo.
Yenza ukuseta kwakhona kwefektri ukubona ukuba kuyakusombulula
Nge-13/09/2012 ngo-22: 54, «Disqus» wabhala:
Sele ndenzile ukuseta kwakhona kumzi-mveliso kwaye ndiyaqhubeka nokufumana le mpazamo, ndinengxaki ngeBluetooth kunye ne-GPS xa ifumana i-satellites kwaye iyadibanisa ilahlekelwa ngumqondiso rhoqo.
Ngaba kukho ukulungisa okanye into yokusombulula le ngxaki?
Kwenzeka ntoni ukuba iselfowuni inqanyuliwe? kwimeko yam ibishiyeke ixhonyiwe ngescreen esimnyama ndiyishiyile ixeshana akhonto kwaye ndayinqamula. ngoku ayijikelezi ndingenza ntoni?
Ndicela uphendule ngoba phambi kokubhala ndizifundile iikhomenti nangaphezulu kwenye.Iyenzekile kodwa andayibona mpendulo.
Buyela kwimowudi yokukhuphela kwaye uphinde inkqubo kodwa qiniseka ukuba unabaqhubi abafakelwe kwikhompyuter yakho
Nge-18/09/2012 ngo-13: 05, «Disqus» wabhala:
Molweni, kuzo zonke iimpundu ezingenalo uchukumiso, iscreen senza mnyama iesile labo, ifowuni yabo yafa okanye uDick wabo wasweleka, shit for assholes, for reverend assholes, if you want a phone with a advanced advanced android, buy a new phone croto, rat, kwaye ukuba awuzenzi, ukuze wenze ezi zinto kufuneka ube nesiqingatha sobuchopho obuluncedo.
Ndenza ntoni, ndenza ntoni? Ifowuni ayizukundisebenzela- ewe, ukuba ayisebenzi, yibeke kwi-vibrator kwaye uyisebenzise njenge-dildo, ihenyukazi elizele
Le nkqubo isebenza kwiGPS S I9000T?
Nge-20/09/2012 ngo-21: 35, «Disqus» wabhala:
Enkosi kakhulu ngengcaciso. Enye yeendawo ze-intanethi apho izinto zichazwe ngokucacileyo.
Ekuphela kwento endikhe ndanexesha eli-2 apho ndibambekile
1. Xa ufaka i-firmware kunye ne-odin awuzange ugqibe umsebenzi. Ekugqibeleni, ndisoyika okona kubi, ndacima ifowuni, ndazama enye inguqulelo ye-odin, njengoko uchazile kwingcaciso. Yayigqibelele.
2.Kufakelo lweengcambu lweCF bekuzama ukubeka ifayile engafakwanga kwi-PDA, ngelixa bekungekho.
Umhlobo ogqwesileyo, ndiyenzile yonke into kwaye igqibelele, ngoku ndinokuvula kobuso kwaye iseli iyakhawuleza. Enkosi
Yorch Jape sitsho
molo umbuzo endinokuwubuza ukuba xa bendikwindlela yokukhuphela ndinqamle iselfowuni, inkqubo ayiqhubeki kwaphela, ihlala kwinxalenye ye-sbl.bin, sele ilixesha kwaye ingaqhubeki, ndingathini yenza ???
Phendula Yorch Jape
Zama ukuyibeka kwimowudi yokukhuphela kwakhona kwaye uphinde
Nge-23/09/2012 ngo-08: 46, «Disqus» wabhala:
UArturo Camejo sitsho
Molo, yimini elungileyo okanye entle kusasa, ubusindisile ubomi bam kodwa yiyo loo nto ulayishe iselfowuni yam, bendicinga ukuba ifile, umntu ufuna ukufaka iposti efanayo naleyo kodwa engenayo i-csc kwaye Ifowuni embi kakhulu ndifuna ukwazi ukuba zithini Ezo zicelo zibini zibonakala kum emva kokwenza inyathelo lokugqibela ukusuka kwi-cfroot? Kwaye ndiyifumana njani ifowuni yam ukuba ibambe i-3g, i-intanethi ayindibambi, ndivela eVenezuela kwaye ndinedijithali
Phendula kuArturo Camejo
Ngenisa uqhagamshelo ngaphandle kwamacingo kwaye uqwalasele i-apn, ukuba awuyazi idatha, inkampani yakho iya kukunika
Nge-29/09/2012 ngo-11: 09, «Disqus» wabhala:
UJulian Steinburg sitsho
Ndingathanda ukwazi ukuba ngaba esi sifundo sisebenza ngokulinganayo kwi-Samsung Galaxy S Pus. I-GT-I9001
Phendula uJulian Steinburg
ungayifaki, ndiyenzile nge-samsung galaxy-g9000-iXNUMX kwaye ayivuli ...
Ngaphambi kokuyihlaziya, ndafunda amagqabantshintshi kwaye uninzi lwazo lwaluthetha ngeembumbulu ezininzi. Ke ndiyibhalela le ENKOSI ngendlela ecaciswe kakuhle ngayo YONKE into, kwaye ndiyivuselele ngaphandle kweengxaki kodwa nge-nerves encinci kuba yayilixesha lokuqala kule mobile. Kulabo bangathandabuzekiyo, inokuthenjwa kakhulu kwaye ukuba ulandela inyathelo-nge-STEP imiyalelo kwaye isebenza ngokugqibeleleyo. Enkosi kwakhona.
Igalelo likaFrancisco ogqwesileyo, yenza inkqubo njengoko uyibonisile kwaye ugqibelele. Enkosi kakhulu kwisifundo sakho malunga nendlela elula, elula nesebenzayo ngayo.
Nika isisombululo mzalwana, ngekhe uyophule iselfowuni yam ngoluhlobo!
Awunakho ukutshintsha igama leposi usithi yeyiphi imodeli?
I-PS: ngoku ndinephepha elinobunzima obungama-2000 pesos yaseArgentina
Iselfowuni, njengoko usitsho, uyaphule wedwa, ukuba ufunda iposti uyakuqonda ukuba yeyiphi imodeli yesiphelo ekhethekileyo, kodwa kunjalo kufuneka ufunde yonke into.
Kulula kangakanani ukutyhola abanye ngeempazamo zakho. Sele ndiyithethile kwaye ukuze ubone ukuthanda kwam okuhle, ukuba undixelela imodeli ethile yesiphelo onayo, siza kubona ukuba yintoni enokwenziwa.
UAlexander Jimenez sitsho
Molo, umntu othile uyayazi indlela yokufumana ifayile yeFirmeware xa uyikhuphela iyafana neCFRoot, kwaye ukuyicinezela kuvelisa ifayile ethi zImage. ngubani onokundinceda?
Phendula kuAntonio Jimenez
Ngaba usifumene isisombululo sale nto ??? Ndiyazama kodwa andazi ukuba ndiyilungisa njani.
Kwenzeka kum ngokufanayo. Ifayile yeCFRoot kunye neFirmware iyafana. Ukuba nabani na angalayisha iFirmware echanekileyo okanye umyili weposi ndingayixabisa.
Imibuliso, ndinengxaki, ndihlaziye ndaya ku-2.3.6 malunga neenyanga ezi-4 ezidlulileyo, ke ngoku tsibela kwinqanaba ngqo lokubeka i-CFROOT ukubeka i-4.1.4, ingxaki kukuba ihlala kwiscreen sasekhaya, leyo ithi I-samsung i9000, ivule, icime, njalo njalo. Ungandinceda? Enkosi.
Molo emva kwemini, sele ndenzile amanyathelo okubeka ingxelo ye-xxjvu, kuphela yingcambu andinakuyenza, ndenza amaqhosha amathathu kwaye iphuma ikwimo yokubuyisela kwimeko yesi-3 kwaye ndingabuyela njani kwimowudi yokukhuphela
Hayi mfondini, le ye-GT-I900 kuphela.
Ngaba le firmware isebenza kunye ne-9000t? njengengcambu?
Hayi, yenzelwe i-I9000
Molo, iposti entle kakhulu !! Isebenza ngokugqibeleleyo !! Ndiyenzile kodwa ngoku ndifuna ukuyeka ukuba yingcambu kwaye ndiyishiye ifowuni njengoko yayinenguqulo 2.3.3 yeyoigo. kwaye ukuba kunokwenzeka ukuphelisa ikhawuntari ye-SAT. NDENZA NJANI ???
Awudingi loo nto ukuba uyithumele kwi-SAT, ukuba uyayilayita inguqulelo ye-2.3.6 JVU kwakhona kwaye ungayenzi inxenye yeCFRoot, iya kuba ilungele ukuyihambisa kwi-SAT.
Le nguqulo ihlaziywa ngokugqibeleleyo kwiiKies.
Qiniseka ukuba wenze ingubo yokusula yonke i-sdcard yangaphakathi.
Ke ndiyenza njani ... kanye njengokuba ndenzile ukubeka uguqulelo lwe-2.3.6 kodwa ngaphandle kokwenza iCFRoot? Ndilahlekile kancinci ..
Ngokuchanekileyo, kodwa icoca imemori yangaphakathi yesixhobo
UMaxy romero sitsho
Ndafaka yonke into njengoko isitsho kwiPosi, kwaye isebenza kakuhle kum, emva koko ndiyilungiselela ii-APN ngokutsho komsebenzisi wam wasekhaya ongu-Orang Israel, kwaye yonke into ihambe kakuhle kakhulu.
Enkosi kakhulu, ngakumbi ingcaciso ekucaciswa ngayo yonke into, ibonisa ukuba utyale ixesha uyenza.
Phendula uMaxy Romero
Enkosi kakhulu ngegalelo, yonke into ibilungile kum. Ngoku ndiyifaka njani iayisi khrimu?
Khangela ibhlog yeTsunami X2.5 eyiJelly Bean Android 4.1.2. Okwangoku yeyona rom intle yomzuzu.
Imibulelo emininzi. Bendingafuni ukutshintsha iselfowuni yam kuba ibintsha kwaye sele ndinayo ngelinye ixesha lonyaka. Halala !!!
Ngoku khanyisa kunye neTsunami X2.5 rom kwaye uya kuba nayo kuhlobo lwamva nje lwe-Android enenkangeleko ephezulu kunye nokusebenza.
Andazi ukuba yintoni esileleyo kodwa emva kokwenza yonke le nkqubo ndizama ukuvula iselfowuni kwaye kuvela umyalezo oluhlaza kuphela ('ilogo. Jpg' yoyisakele)
Ndiyifumana phi imodem yefayile kwaye csc andizifumani.
U-Iddo Jose Claros sitsho
kulungile ... ndinento endifuna ukuyibuza ... ndiwenzile ngokupheleleyo la manyathelo apha eveziweyo, (iselfowuni yam yiGlass S i9000) kwaye xa uqhagamshela kwi-Wi-Fi, kukho ibug enqabileyo kakhulu ethi ibuye ibuye uqhagamshelo kuwo wonke umzuzu ... oko kukuthi, iyanqamla kwi-wifi kwaye iphinde iqhagamshele kwakhona ... yingxaki kuba ngamanye amaxesha ndikhuphela usetyenziso kwaye isike ... kufuneka ndiqalele ukhuphelo kwakhona ... hayi Nditsho nakwividiyo yeYouTube okanye into elolo hlobo ... ndingathanda ukwazi ukuba ingaba yintoni? ... ukuba umntu uyakwazi ukuyisombulula ... kwangaphambili, enkosi!
Phendula u-Iddo José Claros
Enkosi ngesifundo sakho. Ndikwazile ukuvuselela iVibrant yam emva kwesitena esibi.
Andikwazi ukulayisha ifayile engafakwanga yeCF Root (zImage), kwicandelo lePDA, kuba ayinakuyifumana nangona ikwifolda.
Kuya kufuneka ubeke uhlobo oluthile lokongezwa okanye into.
Ogqwesileyo! Ndenze yonke into njengesifundo kwaye sele ndinayo i9000 yam ehlaziyiweyo
Akukho ndlela yokukhuphela i-firmware okanye i-cfroot kwiphepha le-4shared, ukuba umntu unokundinceda …….
cf-ingcambu isebenzela i-gt-i9000b
Ndayifaka yonke into kule leta, xa iqala kwakhona, iscreen siye samnyama, ngoku asikhanyisi, ndine-galaxy s i9000….
nasiphi na isisombululo? : /
Yenza inkqubo kwakhona kwaye uqaphele ukwenza yonke into ngokufanayo nakwisifundo, ngakumbi umba wokwahlula kwakhona.
I-FANTASTIC, enkosi kakhulu, efakwe ngokulandela imiyalelo ngononophelo, kwaye i-terminal isebenza ngokupheleleyo kwaye igqibelele.
Umangalisayo, ugqibelele, ndiyenzile okokuqala kwaye yonke into ivele njengokuba ubusitsho, siyabulela kakhulu ngegalelo lakho, uyaqhubeka ukwenza njalo, sele unomlandeli.
Mva kwemini ndinengxaki ndenze into ethethwa sisifundo kodwa okwenzekayo kukuba ndinemodeli yethebhulethi yp-g70 kwaye xa ndigqiba inkqubo endaweni yokuyiqala kwakhona ihlala kwiscreen esimnyama kunye ne logo ye-samsung, unganceda Ndiyisombulule lonto? ndingavuya kakhulu
Jonga, kuya kufuneka uzame yonke into kwakhona kwaye ngeli xesha ulibuyisele ulwahlulo lwe-2.3.6 kwakhona kwi-odin kwaye ulinde okwethutyana ungayicimi i-galaxy s yakho de ibe ivule imowudi yokwehlisa kwaye ikubuze ulwimi kwaye unokuyinqamula nje
Molo, ndikulungiselelo kodwa sele ithathe ngaphezulu kwemizuzu eli-10 kwaye into ye-sbl iyaqhubeka kwi-odin kwaye ayihambisi phambili umthetho wokugqibela othi sbl.bin pro ayiqhubeki kwaye ndenze yonke into njengoko le ncwadana ithi ndinayo aqinisekisile amanyathelo kwaye ngoku ayihambisi phambili ifowuni sisamsung galaxy gt i9000t ungandinceda okanye uthi km kitar le kwaye ukwazi ukuqhubeka nefowuni yam yesiqhelo ya ke panikie me
Le ayisiyo ye-GT-I9000T kodwa ye-GT-I9000
Ngokwe-firmware kwinto endiyifundileyo, kwakungekho mahluko phakathi kweemodeli ze-i9000t kunye ne-i9000 kwaye i-firmware inokuhlaziywa. Ngaba ndiyaphazama? Uyazi ukuba ndingayifumana phi i-xk firmware yam yoqobo kwaye iselfowuni yam iswelekile
Molo uFrancisco Ruiz… ndiyilandele i-tutorial btal njengoko uyichazile kodwa ndinengxaki efanayo ne-xpressa t… ayidluli kwi-sbl… izixhobo zam yi-GT I9000… ndingavuya kakhulu ukuba ungandikhokela kwaye Isisombululo okanye enye indlela… Enkosi kwangaphambili…! !!
Enkosi kakhulu, ilandelwa ileta kwaye ngaphandle kweengxaki, isithi ekuqaleni u-odin akaphumelelanga, kodwa ekugqibeleni wayifumana. Enkosi kwakhona.
Njengesilika elandela isifundo. Ndinengxaki yokuhlaziya noMphathi weRom ngqo kwiFroyo kwaye ubuncinci ndikwazile ukulayisha kwiGingerbread okwangoku 🙂
Isiqhelo se-i9000t sitsho
Umbuzo wam ngowokuba i9000t iyasebenza ukusukela xa ndenza inkqubo, umgca ophuzi uqhubela phambili kancinci kwaye umbono othile uqalile kwakhona
Phendula kwi-norman i9000t
UJavier Alive sitsho
Molo uFrancisco, ndine-GT-I9000, ndilandele amanyathelo, kodwa into yokuqala engaqhelekanga endiyibonileyo ibikukuxhuma ifowuni kwi-PC okokuqala kwimowudi yokufaka umthwalo, endaweni ye-1 COM ndinayo i-3 IINKCUKACHA. Ndinike UKUQALA kwaye emva kwemizuzu engaphezulu kwe-10 i-COM 0 ibingenanto, kwaye i-COM1 kunye ne-COM2 zinike ukungaphumeleli, kwaye nantso, ndenza ntoni? Andinabuganga bokuqhawula ifowuni kwi-PC, ndilinde impendulo yakho
Phendula kuJavier Vivo
Le yimigca yokugqibela evela efestileni
Injini ye-Odin v.3 (ID: 15) ..
Injini ye-Odin v.3 (ID: 9) ..
Injini ye-Odin v.3 (ID: 8) ..
Kuya kufuneka ufake abaqhubi kwaye uqhagamshele iselfowuni kwimowudi yokukhuphela.
Nge-21/12/2012 ngo-01: 28, «Disqus» wabhala:
Ndiyisombulule, ndisebenzisa i-odin .83 endaweni ye .82, ngoku ndifaka i-jelly bean 4.1.1 rom, ndikhuphele iifayile kwifowuni kwaye iyafaka, kodwa kubonakala ngathi kuthatha ixesha elide, akunjalo? Ndine gargoyle ixesha elide kwiscreen ...
Yonke into isebenze ngokugqibeleleyo kum, enkosi kakhulu!
Phendula ku juantxo23
isebenza kwi-samsung GT-I9000b
UFrancisco: nje ukuba ndisebenzise i-Nexus 4 yam, ndithathe i-Galaxy S kwaye ndazama ukuyikhupha… kunye nemiyalelo yakho AKUKHO UKUSILELA kwaye konke kwimizuzu eli-15.
Enkosi kakhulu ngokwabelana ngolwazi lwakho.
Ngoku ndifuna ukufaka uhlobo lwejinja, ukuba kunokwenzeka 4.2.1 ukuyithelekisa neNexus ...
Naluphi na uluvo ngeli nyathelo litsha?
Landela isifundo ukufaka i-RemICS-JB V1.0
NgoJanuwari 8, 2013 17:22 PM, Disqus wabhala:
ifakwe kwaye isebenza ngokufanelekileyo.
Ndiyabulela kakhulu…. imiyalelo yakho ichanekile.
Emva kosuku lovavanyo, eneneni khange kufuneke ndithenge i-nexus4, umnyele usebenza phantse ngokufanayo …………… .. ukuba ufika e-Oviedo, ndiphathe, ndiyakutyala ezinye izincedisi.
Enkosi mhlobo ndizakuyigcina engqondweni
Nge-09/01/2013 ngo-18: 55, «Disqus» wabhala:
Mholweni. Ungandixelela ukuba le yeyona nto ilungileyo ukuyenza, kuba andiyifumani ipasi. Enkosi
Fco Javier sitsho
Molo uFrancisco, ndilandele nje inyathelo ngenyathelo lokufundisa kwaye xa ndiqala kwakhona ifowuni indibuza iphasiwedi, ndiyisombulula njani le nto. Enkosi
Phendula kuFco Javier
Ukusasazeka kweTami Esp sitsho
Enkosi ndisandula ukubuyisa i-I9000 yam, ndilandele imiyalelo yakho !!!
Phendula kuTami Esp Ukusasazeka
Enkosi kakhulu mhlobo, yonke into isebenza ngokugqibeleleyo !!! Xa usiya eAndalusia unesimemo. Ihagi
Phendula ngengubo 14
Enkosi mhlobo, uyazi apha ukuba unayo nayiphi na imibuzo.
Kulungile ndiyenzile kwileta kwaye ngoku andifumani sisombululo kwinethiwekhi. i-terminal yayiyi-vodafon kwaye ikhutshwe yi-imei oku kuya kuba nento yokwenza nayo. Ndiyabulela kwangoko
Kuya kufuneka uqwalasele ii-APN kunye nedatha yenkampani yakho.
Uya kuyifumana le ngaphakathi konxibelelwano ngaphandle kwamacingo kunye neenethiwekhi. Idatha inokufumaneka kwi-Intanethi okanye ngokutsalela umnxeba uVodafone.
Nge-12/02/2013 ngo-02: 00, «Disqus» wabhala:
Molo, ndinayo i-galaxy si 9000 kwaye ndihlaziya i-firmware engu-2.3.6 yesonka se-ginger, umbuzo wam ngowokuba kukho uhlobo olungcono kule fowuni
Phendula kuFco. Javier
Serch martinez sitsho
yiva umbuzo ukuba uyihlaziye njani njengoko isitsho apha?
kwaye jonga, ndiyifumene le bathi yeyona ilungileyo
Phendula u-Serch Martinez
Ibha eluhlaza okwesibhakabhaka kwimowudi yokukhuphela ayitshintshi, ngaba ithatha ixesha elide? Kuyanceda andazi ukuba ndiyinqamle kwaye ndiyizame ngenye ikhompyuter okanye ndenze ntoni, ndenze yonke into kwileta
Manme Malaga sitsho
Enkosi!! Ndifumene iselfowuni yam ekhululekile
Phendula uManme Málaga
olle uhlala kwi sbl.bin tshomi andazi ndenze ntoni ndicela uphendule
Kuya kufuneka ndibulele kakhulu kweli nqaku ngoba ugcine umnyele wam ekubeni ube sisitena okoko ndazama ukuwuncothula kwelinye icala kwaye bendiqala ukuwuqala kwakhona kwaye ngoku ubufana nomtsha.
Enkosi kakhulu ngentsebenziswano yakho kweli phepha
Ndine-samsung i9000b, uyazi ukuba iyasebenza? Akukho nto ingako ngale Celu. Enkosi !!! Yonke into iyanceda ukudibanisa !!!!
Ndilandele amanyathelo ngokokuthunyelwa kweposi kodwa xa ndiqala kwakhona ifowuni yam ihlala ikwisikrini sekhibhodi esikrinini esicela ukuba ndibethe kumhlaba wokubhaliweyo kwaye awusuki apho, kuyacaca ukuba isikrini sokuchukumisa siyekile ukusebenza kuba nantoni na Andamkeli ukuchukunyiswa kwescreen ...
Yeyiphi imodeli ngqo yesiphelo sakho?
Ayizukundivumela ndenze nantoni na kwiscreen kwaye iqhosha elilandelayo livela apho ndingakwaziyo ukucofa kuba isikrini asiphenduli ...
Ucebisa ukuba ndenze ntoni?
Yiya ku-smobile.com kwaye ukhuphele i-firmware ehambelana nemodeli yesiphelo sakho kuba esi sifundo se-GT-I9000.
Kulungile uFrancisco, enkosi kakhulu…. Ndikhuphela i-firmware efanelekileyo kwindawo leyo.
Enkosi kuwe mhlobo ngokusithemba
UIvan E. sitsho
Molo Carlos, ngaba uye walungisa iscreen kuseto lwekhibhodi ekwi-screen ??? Ndinemodeli efanayo ye-9000b kwaye ndihleli kolo khetho ... Okanye ikhona enye into oyenzileyo ??? Enkosi ngempendulo.
Phendula u-Ivan E.
Le nto ye-i9000 hayi i9000B
Nge-04/04/2013 ngo-04: 49, «Disqus» wabhala:
Molo, ndiyifundele yonke le fowuni yam kwaye indibuza iphasiwedi ukuba andazi nokuba yintoni, ukuba ifowuni ibivaliwe, isisombululo
Kwaye ndiyenza yonke into eyithethayo kwaye ngoku ifowuni ifuna ikhowudi yesisombululo
Iya kuba yikhowudi yeSIM, akunjalo?
I-sim ndiyisusile kwaye ndenza onke amanyathelo njengoko ubonisile kwaye ndiqinisekisa iphasiwedi
Nceda ufake kwakhona
UNicolas A. Ferreyra sitsho
Ndafaka yonke into ngokugqibeleleyo, andinayo iphedi yokubhala okanye nantoni na, ngaba umntu angandinceda?
Phendula uNicolás A. Ferreyra
Yeyiphi imodeli ekhethekileyo yefowuni yakho?
Nge-04/04/2013 ngo-01: 03, «Disqus» wabhala:
Yi-Galaxy S GT-I9000, yonke into yandisebenzela ngaphandle kwescreen
Mholweni!! Andikwazi ukufumana isixhobo ukuba sibe neRoteado entsha, iRedward Recovery. NdineGlass S kwi-Android 2.3.6 ndiyikhuphele le fayile CF-Root-XX_OXA_JVU_2.3.6-v4.3-CWM3RFS kwaye ndilandele amanyathelo owabonisayo, yonke into ibonakala ichanekile, kodwa xa ndizama ukuvula ifowuni kwakhona , Ndifumana kuphela ikona kanxantathu efanayo hayi imenyu enokhetho ekufuneka luphume. Ndenza ntoni embi ???
Ndiyathemba ukuba umntu othile angandinceda. Enkosi.
Yenza eyakho igqibe kwaye awuyi kuba nangxaki. Ngaphezulu kwayo yonke into, qaphela ukuba kwinxalenye yokugqibela awunaso kwakhona isithuba esishiyiweyo.
Nge-06/04/2013 ngo-22: 07, «Disqus» wabhala:
Molo ndenze yonke into njengakwisifundo kodwa ngaphandle kokufaka i-CF-Root andifuni ukuyifaka kuba ndineselfowuni. kodwa xa inkqubo igqityiwe kwaye ifowuni izakuqala kwakhona, indicela ikhowudi kwaye ayizukundivumela ndenze nantoni na .. Ndidinga uncedo lwefaa !!!
Nguwuphi lo mzekelo?
Nge-Epreli 12, 2013 19:26 pm, uDisqus wabhala:
i-galaxy s i9000
ndibulela kakhulu!! Ifowuni bendiyivale nge-imei kwaye bendingakwazi ukufowuna okanye ukufumana iifowuni okanye nantoni na kwaphela. Ngaba kuyamangalisa. Ngokuhlaziya nje ifowuni nge-odin kunye nokufaka ingcambu ye-cf indivulile kwaye kubonakala ngathi intsha! Enkosi kakhulu !! 🙂
Molo, ndiyifundile yonke i-tutorial kwaye ndenza yonke into ngokuchanekileyo, kodwa xa ukuqala kwakhona kuzakwenziwa, kundibuza iphasiwedi kwaye kutheni
Oku akukaze kwenzeke kum kwaye ndibane inani elikhulu leGPS S.
Kwenzeka into efanayo kum .. yintoni eyayilungisiwe?
Ndizongeze zonke iifayile njengoko ubonisile kodwa zihlala zikhetho ...
kwaye ithatha i-1/2 yeyure ngale ndlela ndiyenzayo! 🙁 nceda plss….
ENKOSI ! ! !
Guqula imveliso ye-usb, ngamanye amaxesha ingxaki ikhona
UZito Moreno sitsho
Kwenzeka into efanayo kum, ukutshintsha i-terminal kunye ne-pc, kodwa ndingenza ntoni?
Phendula uZito Moreno
Ngaba iyahambelana nomthala s i9003l? Sele ndikhuphela iinkqubo ukuqala! Ndiyoyika kakhulu
Ungaze ucinge ngokuzama umhlobo wam okanye unokulayisha i-terminal
Nge-21/04/2013 ngo-18: 49, «Disqus» wabhala:
Tony oropeza sitsho
Molo, molo emva kwemini, into yokuqala endifuna ukuyithetha ngumbulelo wam omkhulu kumbhali wale khokelo, ndivela ekubeni yingcali yezixhobo zeBlackberry kwaye kum yayihlala inomdla kakhulu ukwenza olu hlobo lohlaziyo, nangona kunjalo imakethi yaseVenezuela Utshintshile waba yi-IPhone kunye ne-Samsung ke ngoko kufuneka ndenze banzi ii-horizons zam kwaye yiyo loo nto bendifuna isifundo esingaphezulu okanye esincinci esinokundifundisa ukwenza uhlaziyo ngokungathi luchaziwe emntwaneni, ndiyifumene le tutorial ngo ukulandela imiyalelo inyathelo ngenyathelo kwaye ngokucacileyo ujonge imodeli ye-GT-I9000 echazwe ngokucacileyo ekuqaleni kwesi sifundo kwaye iphelele kum, endifuna ukubulela umkhapheli kwakhona ngenkcazo yakhe ecacileyo necacileyo. Isebenze njengekhubalo kum ukuze ndiqonde ngokuchanekileyo uhlaziyo lwesicelo ngasinye. Salu2 sele ukhethwe ziintandokazi zam espro qhubeka nokuthumela.
Phendula uTony Oropeza
Molweni, okokuqala enkosi kuni nonke abasebenza nzima ukuze sonke sonwabe kamva.
Ndifuna ukuvuselela u-Android uguqulelo lwe-i9000 yam kodwa ngaphambi kokulandela amanyathelo ndingathanda ukwazi ukuba ndingayenza na ngenguqulelo 2.2 froyo.xwJPF okanye kufuneka ndiqale nditshintshele kolunye uguqulelo ndize ndilandele amanyathelo achazwe apha? Iselfowuni isuka kuYoigo kwaye andikhange ndichukumise nantoni na edanyazayo okanye engcambu
UAlberto Solis sitsho
Molo, ndingayihlaziya njani i-galaxy s ngaphandle kokufaka i-Kernel yesiko kunye neNgcambu kunye ne-ClockWorkmod Recovery kwaye iya kundisebenzela okanye kufuneka ndifakele ndilinde impendulo enkosi
Phendula u-alberto solis
UJuan Carlos Lara sitsho
Nceda, ndifuna uncedo lwakho. HIce yonke into eya kwileta kwaye xa ifowuni iqala ukuvula, yonke into isebenza ngaphandle kwescreen, andinakukunika okulandelayo. Umnxeba wam uhambe kakubi? Ikwayimodeli efanayo, nceda, ndifuna uncedo.
Phendula uJuan Carlos Lara
Ndiyathandabuza ukuba oku kungenziwa kwi-i9000B?
Fumana iPIT yemephu ..
Ukuhlaziywa kweFirmware kuqala ..
khona u odin wam uhlala exingile engasenabo abansa ndingathini?
Molo uFrancisco, ndenzile okubonisiweyo kolu qeqesho kwaye yonke into ihambe kakuhle, ngaphandle kokuba ndiphulukene nabafowunelwa kwi-ajenda, ngokungabonisi nangaliphi na ixesha ukuba kufuneka kwenziwe ikopi yabafowunelwa ngaphambi kokuqhubeka. Mhlawumbi kuya kuba kuhle ukuba ubandakanya le nto ibonisa abantu abalandelayo abanobuganga bokwenza loo nto.
kunjalo ikhona indlela yokubuyisa abafowunelwa bam?
iqokobhe elixineneyo likanyoko !!!!! ukuze babeka i-q yeyama-9003 ukuba ingama-9000 ???? ifowuni ayikhange ivuleke kakubi, OONYANA BEBITCH !!!!!
Akukho ndawo ithi yeyama-9003. Ukuba awufundanga kakuhle, sukugxeka abanye.
xa iqala kwakhona iyandixelela
Ndingakunika uncedo olukhawulezileyo, nceda
Ndiyifumana njani inethiwekhi yedatha ????
Molo uFrancisco, ndihlala ndikulandela. Kuyenzeka kum ukuba ndinengxaki, ixhomekeke kum kwinkqubo yokuqala, ndiyenzile ngaphezulu kwamaxesha ali-15 kwaye ayisebenzi kum, ndingenza ntoni?
Le nkqubo ithatha imizuzu engama-51, wayefuna ukundidubula kwiibhola
UCarlos Alberto Esis sitsho
Uncedo, ifowuni imnyama, ayiqali okanye ingene kwi-dowloader okanye kwimowudi yokubuyisela, ayibambi itshaja, andazi ukuba kwenzeke ntoni, yonke into yenzeke kakuhle, ngoku ifowuni ayenzi nto, indazi kuphela umzuzwana xa ndibeka ibhetri kwisixhobo se-omap 3630. kodwa andikwazi ukuyifaka
Phendula uCarlos Alberto Esis
umalume ed sitsho
Olona lwazi lubalaseleyo mzalwana, uyisindisile ifowuni yomninawa wam haha
UFrancisco, mva kwemini, ndiwenzile onke amanyathelo, ndinike inkwenkwezi kwaye kwi-2 min i-FAIL yaphuma! odin. Ndizamile ukuyenza kwakhona kwaye kubonakala kwiselfowuni ukuba ifowuni kunye nekhompyuter ziphazamisekile. Ndingenza ntoni ??
Enkosi kakhulu ndiyivuselele ngokuchanekileyo, imiyalelo icaciswe kakuhle, enkosi
MILLL ENKOSI EXELENTEEE …… NDISEBENZELE UKUGQIBELA
molo mhlobo, eu tenho galaxy s i9000b njenge faço ukuyifaka ??
UMark Anderson sitsho
Molweni bafo, bendihlaziya i-firmware yam samsung galaxy y ndimncinci, ndikholelwa ukuba ngale nkqubo, ndiza kuyiphumelela, kwaye ngenxa yezizathu X, phantse ukugqiba ukuyivuselela, icimile ngesiquphe, ndingenza ntoni ayivuli? : S
Phendula uMarcos Anderson
Umbuzo omnye, yeyiphi ingcambu ye-cf endifanele ukuyisebenzisa kwiingcambu ze-gt i9000 nge-Android 2.2 froyo.xwjpf? kwaye ndingayifumana phi ifayile?
Kwimodeli efanayo kodwa nge-Android 2.3.6 ene-gingerbread.xwjw9?
UCarlos Seville sitsho
Ndiyabulela kakhulu, ndiwalandele onke amanyathelo kwaye khange ndibenangxaki.Umbuzo omnye, ngoku ndifumana ukhetho lokubeka nokususa isandi apho ngaphambi kokufikelela ngokukhawuleza ukunxibelelana ne-intanethi ... ingatshintshwa? Kunzima kakhulu ukungena kumnatha wonxibelelwano ukuze usebenze ngalo lonke ixesha.
Phendula u-carlos sevilla
Molo, ndiyifakile inguqulo ye-firmware 2.3.6, kuyimfuneko ukwenza onke amanyathelo abonisiweyo, okanye kuphela kwingcambu yeCF ???
Ukuqala kwi-CFRoot unayo ngokwaneleyo.
Hee mfondini, ndinayo ipokotho ye-gt-s5301l ye-Android ics kwaye bendizibuza ukuba ngaba yinkqubo efanayo ukufaka i-firmware kwiselfowuni yam, iyafana okanye ayikho kwinxalenye yokufaka i-firmware?
is selular yam ayifuni kupheka
Yonke into isebenze ngokugqibeleleyo ngokulandela amanyathelo.
Imibuliso kwaye ndiyabulela!
UMarkitos Lopez obambe umfanekiso sitsho
Ndingathanda ukuba wenze iposti kunye neGT-i9000b… Enkosi
Phendula uMarkitos Lopez
URhider Rixter sitsho
Enkosi uFrancisco Ruiz, ngala manyathelo onokuvuselela ngawo i-Galaxy S I9000, ingcambu ndiyenza ngenye indlela ngenkqubo yamaTshayina iyakhawuleza kwaye ikhuselekile. Enkosi kwakhona ePeru.
Phendula uRhider Rixter
Ndiyenzile le nkqubo kwaye andikwazi ukuyifumana ukuba ndivule i-galaxy s I9000B, nasiphi na isisombululo? Andikwazi ukungena kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, kodwa xa ukhuphela ……
UAntonio Fernandez sitsho
Molo ekuseni uFrancisco. Ndenze la manyathelo ngamanye ngokokubonisileyo. Xa sele ulungile. Inika uthotho lweempazamo (ndinefoto kodwa andazi ukuba ndingayithumela njani) kwaye iselfowni ivula kwaye icime qho kwilogo yeGALAXY S. Ngamanye amaxesha ijika ngokuchanekileyo emva kwexesha elide. indlela yokusombulula ucinezelo kunye neempazamo.
Phendula kuAntonio Fernández
Molo, ungathini nangona iposti yakho indala, isasebenza, sincede ngokufaka iifayile kwi-mega okanye kwiseva yexesha elide. Ukubulisa
U-Estefany Goncalves sitsho
Molo! Ndidinga uncedo. Ndiyaxolisa ukukukhathaza kodwa mhlawumbi ungandinceda. Ifowuni yam ngumthala we-samsgung S GT-I9000, bendifuna ukuyikhulula ndiyisebenzise nenye i-SIM khadi evela kwenye inkampani yeefowuni, ndiye ndayiqala ukuyisusa, landela amanyathelo kwesi sifundo: http://androidadvices.com/how-to-root-galaxy-s-on-android-2-3-4-xxjvp-firmware/3/ kuba inombolo yam yokwakha iphele nge-XXJVP (andikhumbuli eseleyo, ndisisidenge ukuba ndingayibhali phantsi). Sebenzisa i-CF-Root-XX_JVP_AAD_RFS.tar ifayile kwi-ODIN PDA yonke into ibilungile kodwa ndifumana umyalezo we-FAIL, ndizamile kwakhona kwaye i-FAIL yaphuma kwakhona, ngoku ifowuni ityholwa ngeempawu ezintathu: i-pc unxantathu onophawu lwesikhuzo uphawu kunye nomnxeba. Ngenisa imowudi yokukhuphela kakuhle. kodwa ayidluli apho. ndenze ntoni? Ndingathanda ukuzama amanyathelo kwisifundo sakho ukuba siyikhanyise kwaye siyifumane kodwa iyandoyikisa kakhulu. Ngaba ucinga ukuba kungasebenza? Andazi ukuba yeyiphi na i-firmware esetyenziswayo, ndifunde okuninzi kodwa andiqondi, ndiyoyika ukulahleka ngokupheleleyo iselfowuni xa ndibaneka ngokungachanekanga.
Ndiyathemba ukuba ungandinceda. Ndingavuya kakhulu. Ndivela eVenezuela kwaye asinakho ukufikelela kwiidola, le kuphela kweefowuni kunye neeselfowuni ezixabisa amaxesha angama-10 ngaphezulu komvuzo omncinci 🙁
enkosi kakhulu ngexesha lakho lokufunda oku
Phendula u-Estefany Goncalves
Isiseko sam samsung galaxy i8260l ayithathi i-wiffi, akukho, bandixelele ukuba kufuneka ndikhuphele ukubuyisa, i-odin kunye ne-i8260lubamg3, ngoku ndenza ntoni ??????????? ndicela uncede
Sele ndiyifumene okokuqala !! Ifayile yengcambu ayifundwanga ukuba ulayisha umfanekiso ngokuthe ngqo, kuya kufuneka ulayishe ifayile ye .rar (jonga kumfanekiso oqhotyoshelwe kwindawo yethu!
Enkosi kakhulu kumatshini !!
Ingelosi Crs sitsho
Molo zinjani izinto! ps yonke into yayilungile ndade ndahlala kwimowudi yokukhuphela, ps ewe! xa ndivula ifowuni… .odin iyayiqonda kodwa xa ndiyidibanisa kwimowudi yokukhuphela indixelela ukuba iiwindows aziyiboni kwaye enye yezixhobo ze-usb ayisebenzi kakuhle.
Phendula kwiingelosi zeCrs
SUKUHAMBA NGOKUHAMBA sitsho
Ukuqhekeka ndenze yonke into kwaye andizange ndifumane i-PASS. Ngoku skrola iFirmware ye-Samsung i9000! Oku akunamsebenzi kwaye ndenze yonke into njengoko injalo!
Phendula u-NO ANDAAAAAAAAAAAA
Ngaba ikhona indlela yokwenza ngayo nge-linux, kwiifestile andikwazi ukufaka i-odin kwaye iselfowuni ayindiboni xa ndiyidibanisa kwimowudi yokugcina izinto
ANDIKULAYI IFAYILE YERAR KWI-ODIN PDA ICANDELO. NASIPHI ISISOMBULULO?
UMario Velasquez sitsho
Mnumzana, sithini isisombululo xa izixhobo ze-I9000 zingaphenduli kuyo nayiphi na indibaniselwano yezitshixo, nokuba ungene kwimowudi yokukhuphela okanye kwimowudi yokuseta kwakhona? ... Ngokuzimeleyo, sele ndizamile zonke iindlela endizifumene kwi-intanethi kodwa izixhobo zihlala zijika kwimowudi yesiqhelo…. Enkosi kwangaphambili ngempendulo yakho. Ukubulisa.
Phendula uMario Velasquez
Hee mhlobo uncede ndibeke iifayile njengoko zinjalo kwaye ndiyazinika ukuqala kwaye azihambi phambili
Ndiyabulela kakhulu. Hlaziya i-Samsung Galaxy i9000t eyayine-Android 2.1, ungayihlaziya ibe yi-2.3.6, ngezi nkqubo. Khumbula i9000 kunye ne-i9000t ziyahambelana neerom zazo. Kodwa hayi kwezinye iimodeli. Ukubulisa
Ndenze yonke into kakuhle kodwa xa ndiqala iyandibuza iphasiwedi
ULina Roza sitsho
Ma tean, kuidas suhted on meie elus mashokoised ja kui palju me tahame olla õnnelikud armastatud inimesega, mõnikord pole see lihtne. Me kõik näeme vaeva oma armuelu parandamisega ja oleme lihtsalt õnnelikud.
Thumela i-imeyile: (info @ spelloflife. Org)
või Külasta: www .spelloflife. okanye
Phendula uLina Roza